Manchester United oo markaan isku dayi doonta saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Atletico Madrid – Gool FM
Manchester United oo markaan isku dayi doonta saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Atletico Madrid
Haaruun January 16, 2020
(Manchester) 16 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayi doonto inay amaah kula soo wareego ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid, Marcos Llorente.
Dhaawacyada Paul Pogba iyo Scott McTominay ayaa soo yareeyay fursadaha ay Red Devils ku kala xulan karaan lacibiintooda, tiyoo ay jirto in suuqyadii la soo dhaafay ay kooxda reer England iska iibisay dhowr xiddig oo muhiim u ahaa naadiga faca weyn ee 13 jeer hanatay horyaalka Ingiriiska.
Manchester United ayaa weli la la xiriirinayaa u dhaqaaqista kabtanka Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes, laakiin sida laga soo xigtay Manchester Evening News, kooxda ayaa sidoo kale doonaysa inay la soo saxiixato xiddig khadka dhexe ah inta lagu jiro suuqa bishan Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Llorente ay u aqoonsadeen wakiillada kooxda Ingariiska inuu yahay saxiixa ugu fiican, isagoo ku dhibtooday inuu hor mar badan ka sameeyo tan iyo markii uu sanadkii hore kaga soo biiray Atletico Madrid naadiga Real Madrid.
24-sano jirkan reer Spain oo ugu biiray kooxda Diego Simeone heshiis shan sano ah ka hor xilli ciyaareedka 2019-20 ayaa kaliya saddex jeer ku soo bilaabay horyaalka La Liga inta lagu jiro xilli ciyaareedkan.
Fred iyo Nemanja Matic ayaa hadda ah kaliya xiddigaha khadka dhexe ee taamka u ah kooxda kaliya labadaasi xiddigna kuma filna naadiga Manchester United oo tartammo kala duwan ka qeyb-galaysa kal ciyaareedkan.
Macallinka Kooxda Dekedda ee Yuu Cali oo ka hadlay guushii ay ka gareen Rajo FC & Rajadooda hanashada horyaalka
“Waan ka murugeysanahay in Messi uu ka Ballon d'Or badan yahay Cristiano Ronaldo waana ka caawin doonaa”